LG ကသူ့ရဲ့ G4 က Quick Charge 2.0 အတွက်အထောက်အပံ့ပေးတယ်လို့ပြောပါတယ် Androidsis
ဒါဟာ high-end သစ်ကိုပုံရသည် ဘက်ပေါင်းစုံအစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းစနစ်ရှိရန်လိုအပ်သည် အသုံးပြုသူမှမကြာသေးမီကဝယ်ယူခဲ့သောတယ်လီဖုန်းသည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကြီးမားသောအားသာချက်ရှိပြီး terminal ကိုထပ်မံအသုံးပြုရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရန်မလိုပါ။
Samsung Galaxy S6 သို့မဟုတ် HTC One M9 တွင်အားသွင်းစနစ်မြန်လျှင်၊ LG G4 သည်အဖြေမှန်မရရှိဘဲသူတို့၏အသစ်စက်စက် GXNUMX ကိုပြသသောအခါမေးခွန်းမှာမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည် ဒီသဘောမျိုးကဒီစွမ်းရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသံသယတွေဖြစ်လာတာကအရေးကြီးသလိုထင်ရသလို high-end ဖုန်းအတွက်ပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေယခုကုမ္ပဏီသည်ယင်း၏အဓိကလုပ်ငန်းကိုယခုထောက်ပံ့နေပြီဟုဆိုနေသည် Qualcomm မှလျင်မြန်စွာတာဝန်ခံ 2.0.
Snapdragon 808 ချစ်ပ်သည်အထောက်အပံ့ပေးထားသည်
LG သည် Quick Charge 2.0 နှင့်ကိုက်ညီမှုကိုတစ်ခါမှမဖော်ပြခဲ့ပါ သူ၏ LG G4 ၏ Snapdragon 808 ၏ GUTS တွင် Snapdragon XNUMX ချစ်ပ်သည်လျင်မြန်စွာအားသွင်းသည့်စနစ်အတွက်အထောက်အပံ့ပေးနိုင်သည့်တိုင်သူ၏ဖော်ပြချက်အချို့သို့မဟုတ်စာနယ်ဇင်းများကဖော်ပြသည်။ သူတို့ကဲ့သို့ပြိုင်ဘက်ရှိပါကတစ် ဦး ကအစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းစနစ် က galaxy S6 သို့မဟုတ် One M9 နှင့်ကွဲပြားခြားနားသည့်မီဒီယာများမှထုတ်ပြန်သောဆန်းစစ်ချက်များအရသုံးစွဲသူသည်သူတို့၏ Android ဖုန်း၏ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုပြောင်းလဲသွားသည်။
LG ကဒီအချက်ကိုသဘောပေါက်ပြီ အခုဆိုရင်ဖုန်းက Qualcomm Quick Charge 2.0 ကိုထောက်ပံ့ပေးနေပြီဆိုတာအတည်ပြုနေပြီ ၎င်းသည်၎င်း၏အသစ်စက်စက် G4 အသစ်ကိုကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ချိရန်ပြင်ဆင်နေချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ Quick Charge 2.0 သည် G4 ပါ ၀ င်သော box ကိုဖွင့်လိုက်သောအခါဤစနစ်၏ကောင်းကျိုးများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုအသုံးချသည့်အပို adapter ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်လားဆိုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိနိုင်ပါ။
ယခုနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ချိမည့် LG အကြားအလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ အသုံးပြုသူသည်မြန်ဆန်သောအားသွင်းမှု၏အားသာချက်ကိုယူပြီးအခြားသောထုတ်လုပ်သူများထံမှ high-end ဖုန်းကိုပိုင်ဆိုင်သောအခါအခြားအသုံးပြုသူများကဲ့သို့ဤရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG က G4 ကမြန်မြန်ဆန်ဆန် 2.0 XNUMX ပံ့ပိုးမှုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်ဟုပြော
“ QuickCharge” ဟုခေါ်သောဖုန်းသည်အထဲ၌သယ်ဆောင်ထားသည့်မည်သည့်အရာမျှသို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်မည်သည့်“ နည်းပညာ” မဟုတ်ကြောင်းတစ်ကြိမ်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်နားလည်သဘောပေါက်လာကြပါစို့။ တစ်ခါတစ်ရံမှာဒီလိုမျိုးစာမူတပုဒ်ကိုဘယ်လိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုတစ်ခါတလေမှာနားမလည်တတ်ပါဘူး။ https://www.androidsis.com/quick-charge-2-0-qualcomm
ထို့အပြင် Quickcharge သည်အချိန်အတန်ကြာပိုမိုမြင့်မားသောအားသွင်းမှုကိုဖြစ်စေသည့် "charger" ထက်မပိုသည်ကိုလည်းမသေချာပါ။ 'နည်းပညာ' ဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအချက်မှာ၎င်းသည်ပရိုဆက်ဆာကိုယ်တိုင်သာဖြစ်ပြီး charger ကထောက်ပံ့ပေးသောဝန်ကိုထိန်းချုပ်ရန်တာဝန်ရှိသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်အတွက်မူ၎င်းသည်မိုက်မဲသောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ Nexus5တွင်သေးငယ်သည့် IT ချစ်ပ်တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည် Nexus ၏ဘက်ထရီအားသွင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်သီးသန့်တာ ၀ န်ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကမှထိုကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုရှိသည့်တစ်ခုတည်းသောဖုန်းမဟုတ်ပါ။ Nexus ၏ဖြစ်ရပ်တွင်၎င်းချစ်ပ်သည်လုပ်ဆောင်မှုသည်အရှည်ဆုံးဘက်ထရီသက်တမ်းကိုရရှိရန်အားသွင်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ (နှင့်အားထုတ်ရန်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုပင်) ကိုထိန်းညှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် lithium battery အားမည်သို့အားသွင်းသည်ကိုထိန်းချုပ်ရန်သည်သူ့ဘဝအတွက်ဖြစ်သည်။
Qualcom လုပ်ခဲ့သည့်အရာမှာ၎င်းချစ်ပ်များလုပ်ဆောင်သည့်လုပ်ငန်းများကိုအဓိက CPU ထဲ၌ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူများက၎င်းအပိုချစ်ပ်ကို Motherboard တွင်သိမ်းဆည်းသည်။ 'Qualcomm API ကိုထောက်ပံ့တဲ့ loader' ၎င်းကိုပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့်အားသွင်းချိန်၌အားသွင်းရန်အတွက်“ စွမ်းအင်ပိုမိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့်” အထူးအားသွင်းစက်အချို့ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းသူတို့သဘောပေါက်လာကြပြီးထိုအချိန်တွင်ဘက်ထရီသည်အအေးလွန်ကဲခြင်း (အကြီးမားဆုံးပြsinceနာဖြစ်သောကြောင့်) LiPo ဘက်ထရီကိုအားသွင်းရန်မှာအပူလွန်ကဲခြင်းမရှိဘဲပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဘာပြောတာလဲ လျင်မြန်စွာအားသွင်းခြင်းသည်ဖုန်းပေါ်ရှိ charger အပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ပြီးတော့၎င်းကိုထောက်ပံ့တဲ့ 'ဖုန်း' တခုအကြောင်းပြောလာရင်၊ အဲဒါကပရိုဆက်ဆာဖြစ်တယ်လို့ပြောသင့်တယ်။ ဒါကြောင့် ... Qualcomm ကိုသယ်ဆောင်တဲ့ထုတ်လုပ်သူအားလုံးက 'အကယ်၍ ဒီအမျိုးအစားအားသွင်းစက်ကိုရောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်' ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းကိုထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လမ်းဖြင့်။ သူတို့ဟာငါးပိကျိုးနပ်ပါတယ်။
ငါကတည်းက ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းနှင့်အတူဆဲလ်ဖုန်းဘယ်မှာ !!!!!